Ohanaeze Ndị Igbo Adọọla Ndị Ọrụ Nchekwa Aka na Ntị
A dọọla ndị ọrụ nchekwa dị iche iche n'ala anyị aka na ntị banyere otu ha si ete ọtụtụ ụmụ mmadụ ure n'okporo ụzọ, na-eyi ha egwu, ma na-anakọsịkwa ndị na-emere onwe ha njem ego ha ji eme njem, wee kpọkuo ha ka ha sepu aka na ya bụ mpụ na arụrụ ala jọgburu onwe ya.
Nke a dị n'ozi a kụpụrụ site n'aka onyeisi otu a, ngalaba steeti Anambra bụ maazị Damian Okeke-Ogene na ode akwụkwọ ha bụ maazị Mike Nnakwuzie, bụ ndị kwara arịrị banyere otu ya bụ ihe sizị arị ibe ya elu ugbu a, tinyekwuoro na ndị ọrụ nchekwa a amalitebeghị imejupute ntụziaka ahụ e nyere, ka e mechigasịa ebe nnyocha ahụ e nwere n'okporo ụzọ dị iche iche n'ala anyị.
Otu ahụ katọrọ kpamkpam atụmatụ ijigasị ihe gbochie ụzọ, iji wee yie ndị mmadụ egwu ma pụnarịkwa ha ego ha ji eme njem, ọbụnadị ma oge ndị ahụ nwere akwụkwọ ụgbọala ha n'ozuzu oke, ma jidekwa akwụkwọ ikike gbasaara ngwọ ahịa ha niile dị n'ụgbọala ahụ.
Ya bụ ozi a kụpụrụ na-akọwa na ọ bụ eziokwu na ọ dị mkpa ka ndị ọrụ nchekwa rụọ ọrụ ha, mana o zighị ezi chaachaa ka ha na-akpụ ugwu ụmụ mmadụ n'ala n'okporo ụzọ ma were aka ike na-anakọsị ha ego ha ji eme njem.
Ha mekwazịrị ka a mara na ndị otu ahụ na isi ụlọ ọrụ ndị ọrụ nchekwa dị iche iche na-agba mbọ ugbu a, iji wee weputa akara ekwentị ndị na-eme njem ga na-akpọ oge ọbụla ndị ọrụ nchekwa malitere ịna ha ihe ezighị n'iwu, iji wee hụ na e mebighị maọbụ kpụtọọ ikike ahụ dịịrị mmadụ ime njem, ọbụbadị dịka ọ dị n'akwkwọ iwu na-achị ala anyị.